IDikwena iphothule ukusayina oweWits | News24
IDikwena iphothule ukusayina oweWits
Johannesburg – Iplatinum Stars isiphothulile ukusayina umdlali uRobin Ngalande osuka kwiBidvest Wits ozobolekiswa isizini yonke ka-2015/16 kuleli qembu laseNorth West.
ISiya Crew ibike ngeledlule ukuthi lo mdlali odabuka eMalawi ochithe isizini edlule egijima kwi-Ajax Cape Town usezinhlelweni zokujoyina iDikwena ngemuva kokuba la maqembu evumelene ngokubolekisana.
Imithombo yeSiya Crew isikuqinisekisile ukuthi konke sekuphothuliwe mayelana nalo mdlali ejoyina iDikwena.
OLUNYE UDABA:Ngeke ngizifanise noSteve - OwelePSL
Nakuba konke sekuphothuliwe mayelana nokuthi lo mdlali oneminyaka engu-22 ajoyine iDikwena kodwa kusamele alungise amaphepha amgunyaza ukuthi asebenze njengoba eseshintsha abaqashi.
Kusalindeleke ukuthi kucace ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi lo mdlali athole wonke amaphepha akhe amgunyaza ukuthi asebenze ngokugcwele kuleli.
Umqeqeshi weDikwena uCavin Johnson uzoba nethemba lokhuthi uNgalande athole zonke izimvume zakhe ngaphambi kokuqala kwesizini.